Umnquma kunye nePine tree Cottage - I-Airbnb
Umnquma kunye nePine tree Cottage
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKallia
Indlu enoxolo kwindawo yasemaphandleni ejikelezwe yimithi. Umthi omkhulu wepine kunye nomthi womnquma omdala kakhulu ziimpawu eziphakamileyo!! Ukuba uyayithanda indalo, ukubukela iinkwenkwezi esibhakabhakeni esicacileyo kwaye uvuke umamele iintaka, le yindawo yakho !!
Indlu ifumaneka kwidolophana yaseHoulou, imizuzu engama-25 ngaphandle kwedolophu yasePaphos. Indlu yakhiwe phezulu kwilali kwaye ngenxa yoko inombono obalaseleyo. Izindlu zikhona zamagumbi amabini okulala aneebhedi ezimbini, indawo yokuhlala enomabonakude, iDVD kunye nethiyetha yasekhaya, indawo yokutyela kunye nekhitshi enegumbi lokuhlala elincinci elinendawo yomlilo kunye nomabonakude. Indlu ijikelezwe yigadi enkulu kwaye ineeveranda ezimbini ezigqunyiweyo apho unokuhlala kwaye ujabulele imozulu entle yelali kunye ne-kiosk egqunywe zizityalo.Egadini ungayonwabela ichibi le-pvc elingaphezulu komhlaba 2.75×5.75 mitha apho unako ukonwabele ukuqubha. Ukuqubha kuyafumaneka ukusuka ngoMeyi ukuya ku-Okthobha, emva koko ebusika umntu unokuyonwabela indawo yomlilo :)
Igumbi elinye lokulala kunye negumbi lokuhlala line / c, ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo nge-microwave, i-oveni, iketile, ifriji, umatshini wokuhlamba.
Iziko lelali kukuhamba imizuzu emihlanu kuphela kwaye apho kwivenkile yekofu ungafumana izinto ezisisiseko ezifana nobisi okanye isonka. Ilali yaseLetymbou yimizuzu emihlanu kuphela ngemoto kwaye apho ungafumana imakethi encinci, indawo yokutyela kunye ne-pub. Ukusuka eHoulou unokwenza uhambo oluya kwidolophana yasePanagia, idolophana yaseStatos Agios Fotios, i-monastery yaseChrisorogiatisa kunye ne-Agia moni Monastery, kwezi ndawo unokuba ngaphantsi kwemizuzu engama-20 ngemoto.
Ungandwendwela iKallepeia kunye neTsada kwiindawo zokutyela okanye igalufa yaseMinthis Hill.
Lo mmandla ulungele ukuhamba intaba kunye nokubukela iintaka.
Ekugqibeleni indlu ineempembelelo zobugcisa, sithemba ukuba ukhetha indlu yethu yokuhlala kwaye ube nexesha elihle njengoko senza apho, sineenkumbulo ezintle ezivela kwindlu yaseHoulou.
I-Houlou yidolophana yendabuko , ifanele ukuba yidolophana yase-Arodafnousa (intombazana encinci ukuba ukumkani "uRigas" wayethandana naye). Kufanelekile ukuhamba ngezitrato ezinqamlekileyo , uye "Exo Vrisi", kunye ne-waterfall encinci , tyelela ii-chapels ezahlukeneyo zedolophana kunye necawa enkulu ebizwa ngokuba yi-Regina (uKumkanikazi) . Ehlotyeni kukho umthendeleko we-Ezousa. "Ezousa" ngumlambo odlula ecaleni kwelali kwaye wenze intlambo yomgcini. Kwisikwere uya kufumana "ikhefi" yesiko kunye nebala lokudlala elincinci.
Umbuki zindwendwe ngu- Kallia
Iindwendwe zingafikelela kuthi ngayo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso.